FAQs - DongGuan JinRong Aliminum ကုန်ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ
လူမီနီယမ် Profiles (OEM / machine)
Extruded လူမီနီယမ် Profiles
စက်မှုဇုန်က Non-နျ Standard Profiles
LED Tube ပုံစံအမျိုးမျိုး Profiles
အဆိုပါ MOQ အကြောင်း
OEM လူမီနီယမ် Profiles
ကျနော်တို့ဒီလိုစက်မှုဇုန် Non-စံပစ္စည်း, လူမီနီယံနေမှုကိုချေဖျက်အစိတ်အပိုင်းများ, လူမီနီယမ်ဓာတ်တိုး, အပူစုပ်, လူမီနီယံဝက်အူစသည်တို့အဖြစ် 10 နှစ်ကျော်အဘို့အလူမီနီယံအပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုထားပြီးဖြစ်သောစက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ကြ၏
သင့်ရဲ့အားသာချက်နဲ့အမိန့်ဖြစ်စဉ်ကိုကဘာလဲ? လိုအပ်မဆို MOQ ရှိပါသလား?
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအတွက်စက်ရုံအဘိုးနှင့်လူမီနီယံလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် OEM ဝန်ဆောင်မှုပေး။ အဆိုပါအမိန့်ဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုရန်ပုံဆွဲပေးပို့ကြောင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမလိုအပ် MOQ အပေါ်အခြေခံပြီးသင့်အားဆန်းစစ်သင့်ရဲ့ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ကိုးကားမည်။ (အဘယ်သူမျှမ MOQ လိုအပ်ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပမာဏများအတွက်စျေးနှုန်းကြီးကြီးအရေအတွက်ထက်ပိုများပါလိမ့်မယ်)
ကျနော်တို့ကအရမ်းအဆုံးမှအစနှင့်အမှားအခမဲ့ 100% မှာရည်ရွယ်ထားထံမှထိန်းချုပ်တင်းကျပ်အရည်အသွေးကိုကိုင်ထားပါ။ မည်သည့်ပြဿနာလည်းမရှိလျှင်သင်ပြီးနောက်-ရောင်းချဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းအမိန့်ရေကြောင်းမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ QC ဌာနရှောက်သွားရပါမည်။
သငျသညျရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ, သည်းခံစိတ်, မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်သင်လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏအတိုင်းသင်၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုပြောပြပေးပါ။
နမူနာချမှတ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဒီအကြောင်း5~ 10 ရက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် complicated.We ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကြီးမားသောအမိန့်ကြောင့် DHL, EMS စသည်တို့ကိုအားဖြင့်သူတို့ကိုတင်ပို့နိုင်ခြင်း, ငါတို့ FOB အားဖြင့်သူတို့ကိုပို့ဆောင်ထားမည်အရေအတွက်နှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ညီသည် အဆိုပါပေးပို့အချိန်ကိုသင်တင်ပို့ရန်ချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်အပေါ်အခြေခံပြီးပေမယ့်အနီးစပ်ဆုံးရက်ပေါင်း 25 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရှန်ကျန်း, ကွမ်ကျိုး, ဟောင်ကောင်ကနေအနီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် Jiji စက်မှုဇုန်, Shanghe ကျေးရွာ, Wangniudun မြို့, Dongguan စီးတီး, တွင်တည်ရှိသည်။
Jiji စက်မှုဇုန်လမ်း, Shanghe ကျေးရွာ, Wangniudun မြို့, Donguan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်